मनोरन्जन Archives - Page 106 of 115 - Recent Nepal News
मेरी आम्मै नि…कहाँबाट हुनु ? ३१ लागे ‘पाँडे’ शुभकामनाको ओइरो
काठमाडौं,असोज ९ – हास्यश्रृंखला 'भद्रगोल' वाट चर्चामा आएका चर्चित कलाकार अर्जुन घिमिरे (पाँडे) को आज जन्मदिन मनाउदै छन् । वृद्धको भूमिकामा अभिनय गरेर चर्चित भएका पाँडे असोज ९ गते नुवाकोटको ओखरपौवा गाविस वडा नं. ४ मा जन्मिनु भएको हो । उहाँ आजवाट ३१ वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको छ । जन्मदिनको दिन सिन्धुपाल्चोकको गिरान्चौरमा गएर त्यहाँका भूकम्प पिडितहरुलाई खाना ख्वाउने कार्यक्रम रहेता पनि समय अभावले उहा...
काठमाडौं । चलचित्र ‘वडा नम्बर छ’को ‘सुर्के थैली खै’ बोलको गीतले १८औँ इमेज अवार्डमा ‘पब्लिक च्वाइस अवार्ड’ जितेको छ । शनिबार यहाँ सम्पन्न अवार्ड कार्यक्रममा उक्त गीतलाई जनताले दिएको एसएमएस मतका आधारमा विजेता चयन गरिएको हो । नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको महोत्सवका रुपमा लिइने इमेज अवार्डमा यस वर्षको सर्वोत्कृष्ट पुरुष गायनको उपाधि ‘धोका दिने’ गीतबाट गायक मनोज राज तथा महिला गायनको उपाधि ‘आकाश उही’बाट बा...
तस्बिरमा हेर्नुहोस् ब्राजिलियन मोडलको टपलेस फोटोसुट
अना वेएट्रिज बारोज विश्वकै सर्वाधिक डिमाण्ड भएकी मोडल हुन् । उनै ३४ बर्षकी यी चर्चित मोडलले न्यू फल २०१६ क्याम्पिएनका लागि फोटोसुट गराएकी छिन् । एक ज्वेलरी ब्रान्डका लागि उनले आफ्नो कामुक फोटोसुट गराएकी छिन् । ब्राजिलकी यी चर्चित मोडलले आफ्नो बक्षस्थल आधा मात्र छोपेर गराएको फोटोसुट निकै हट लाग्छ । उनी केही तस्बिरमा टपलेस समेत भएकी छिन् ।
‘लाल्टिन’ मा आस्था राउतको विन्दास स्वर, तताउँन सक्छ बजार (अडियो जुकबक्स रिलिज)
काठमाडौं, असोज ८ – चैत १८ गतेलाई प्रदर्शन मिति तय गरिएको फिल्म ‘लाल्टिन’ को अडियो जुकबक्स रिलिज गरिएको छ । शिर्ष सहित पाँच गीत समावेश अडियोमा भिन्न भिन्न प्याट्रनका गीतहरु समावेश छन् । जसमध्ये ‘चमेली’ बोलका बार सङ्गले बजार तताउँन सक्छ । किरण माइकलको संगीत तथा शब्द रहेको यो गीतमा आस्था राउतको विन्दास स्वर छ । ‘हिव्स्की’ बोलको गीत पनि युवा पुस्ता माझ प्रिय बन्न सक्छ । भानु प्रतापको प्रस्तुती...
सिड्नी-अस्ट्रेलियाका विभिन्न शहरहरुमा नेपालीहरुको महान चाड बडा दसैँ को चहल पहल सुरु भएको छ । यहाँ को नेपाली समाज आफ्नो सस्कृति प्रति निकै प्रतिबद्द्द छ । त्येसैले नेपालका सबै चाड पर्ब यहा धुमधामले आयोजना हुन्छन ।तीजको रमझम सकिएको धेरै भयको छैन । प्रत्यक हप्ता जस्तो यहाँ नया नेपालि चलचित्र यहाका ठुला हलहरुमा लाग्ने गरेका छन् । एक हिसाबले भन्ने हो भने अस्ट्रेलिया को नेपालि समाज ब्यस्त मात्रै छैन फु...
पाकिस्तानी कलाकारलाई २४ घण्टाभित्र भारत छाड्न धम्की
एजेन्सी,असोज ७ – पाकिस्तानी कलाकारलाई २४ घण्टाभित्र भारत छोड्न धम्की दिईएको छ । महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएसएन ले भारतमा बसिरहेका पाकिस्तानी कलाकारहरुलाई देश छोड्नका लागि ४८ घण्टाको समयावधी तोकेको हो । पाकिस्तानी कलाकारलाई धम्की दिँदै एमएसएनको नेता अमेय कोपकरले यस विषयमा जानकारी दिँदै भनेका छन्, ‘हामी पाकिस्तानी कलाकारलाई भारत छोड्नका लागि ४८ घण्टाको समय दिँदैछौं । यदि उनीहरुले देश छोड्न मानेनन...
बन्ने भो ‘रानी’, अनुप ,मलिना सारुक अनि मनिस शीर्ष भूमिकामा
काठमाडौं, असोज ७ – निर्देशक दयाराम दाहालको निर्देशनमा चलचित्र ‘रानी’ छायानाकंन सुरु भएको छ । राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा एक कार्यक्रमका बीच पत्रकार सम्मेलन गर्दै फिल्मको मुहुर्त सर्ट दिइएको थियो । जय माँ अम्बे फिल्मसको ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको चलचित्र ‘रानी’ मा अनुप विक्रम शाही , मलिना जोशी, ध्रव कोइराला, हिमा कोइराला, रामचन्द्र अधिकारी, किशोर झा, सिपी पौडेल, सुबास गजुरेल, रवि शर्मालगायतका कला...
काठमाडौं आउँदै बलिउड अभिनेत्री उर्बसी रौटेला
काठमाडौं, असोज ७ – पछिल्लो समय बलिउडका कलाकारहरुको नेपाल आगमन बढ्दो छ । यसै क्रममा बलिउड अभिनेत्री उर्बसी रौटेला यही असोज १४ गते काठमाडौं आउँदै छिन् । युहान इन्टरनेशनल इभेन्टस्को निम्तामा उनी दुई दिनका लागि काठमाडौं आउन लागेकी हुन् । युहान इन्टरनेशनल इभेन्टसले सोही दिन बेलुकी पख ‘मोडल क्वेस्ट इन्टर नेशलन नेपाल, सिजन–२’ आयोजना गर्दैछ । राजधानीका त्रिपुरेश्वरस्थित त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लबको...
पुनर्निर्माणमा जुट्न आग्रह गर्दै बन्यो यस्तो गीत (भिडियो)
काठमाडौं, असोज ७ – पुनर्निर्माणमा जुट्न युवाहरुलाई जागरुक गर्ने नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । यो प्रण पछि डा. भीष्म कुमार भूसालको शब्दमा अब उठ जाग बोलको गीत सार्वजनिक भएको हो । भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता र भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणमा दिलोज्यानले अहोरात्र खटिएका डा. भूसालबाट ३ महिनाको अवधिमा ३ वटा गीत सार्वजनिक भएका छन् । भ्रष्टाचारमुक्त समाजको परिकल्पना गर्दै वाचा र पुनर्निर्माणका समर्पित हु...
एरिएल हट अवतारमा यसरी खुलिन् (फोटोफिचर)
एरियल विन्टर एबिसीको आधुनिक परिवारमा बेवकुप किशोरीको भूमिका खेल्छिन् । तर उनी गत हप्ता सधैंभन्दा फरक अवतारमा बहामास किनारमा रमाइन् । एरिएल आफ्नो प्रेमीका साथ यसरी विभिन्न पोजमा खुलिन् :